Ilaina ny fisarahana dingana fanonerana mandeha ho azy ho an'ny capacitor tamberina famerenam-pahefana manan-tsaina
Ny fizarana fisarahana fanonerana mandeha ho azy ny capacitor tamberina herinaratra mihetsika mahery dia azo zaraina ho valisoa mandeha ho azy amin'ny capacitor telo dingana sy valisoa automatique phase fizarana arakaraka ny toetrany. Feperana mandeha ho azy capacitance telo dingana dia suita ...
Inona avy ireo fiasan'ny capacitor herinaratra malefaka ambany amin'ny rafitra
Ny capacitor herin'ny herinaratra ambany herinaratra dia mamaky ny fitaovana fanonerana herinaratra miodina amin'ny herinaratra ambany efa ambany amin'ny rafitra, mahatsapa ny fomba vaovao fanaraha-maso itsinjaram-pahefana sy fitantanana afovoany; ny rafitra fanonerana dia manana ny mampiavaka ny fitaovana kely kokoa, ny maripana kely ris ...
Fomba fiasan'ny capacitor herinaratra
(1) Fiasa azo antoka amin'ny capacitor Ny capacitor dia miasa amin'ny voltatra nomen'ny. toy ny Mandritra izao fotoana izao, tsy azo atao ny miasa ao anatin'ny 5% -n'ny volan-tsivana naoty; rehefa mihoatra ny in-1 1,1 ny volan'ny volt, dia ny fandidiana fohy ihany no avela. Na izany aza, ny herin'ny herisetra mihoampampana ...